Uphengululo lweLikebook Mars ye-7,8 "ereader ene-Android | Zonke ii-eReaders
Kunamhlanje Ukuhlaziywa kweLikbook Mars nguBoyue uphawu lwesiTshayina olungaziwa ngabantu abaninzi eSpain. Kwaye sinomgangatho ophantsi waseTshayina onxulumene nayo, kodwa ndiyakuqinisekisa ukuba i-Likbook ikwinqanaba elifanayo ne-Kindle ne-Kobo. Ndonwabile ukufumana isixhobo esikumgangatho omkhulu, esikrinini kunye neempawu ezikumanqanaba afanayo nalawo sele ebizwa iAmazon neKobo.
Emva kokuyivavanya ngokucokisekileyo, ayimangalisi into yokuba uninzi lwamajelo eendaba kwilizwe jikelele ayithathela ingqalelo njengeyona ilungileyo okanye enye yezona zifundi zintle ze-2018 kwaye kukusetyenziswa kwe-Android kunye noluhlu olupheleleyo lwezinto onokuzikhetha kunye nokuhamba isebenza yenza ukhetho lokujonga ukuba ngaba ucinga ukuthenga umfundi (Ungayithenga kwivenkile yaseBoyue e Aliexpress)
3.1 Ukubamba ubunzima, indawo ebuthathaka
4 Ukukhanyisa kunye nebhetri
5 I-Android kunye namathuba ayo
7.1 Igalari yefoto yeLikbook Mars
7.2 Inkqubo yokusebenza yegalari yomfanekiso
7,8, I-E inki Ileta HD.
Imemori yangaphakathi ye-16 GB
Micro SD ukuya kuthi ga kwi-64GB
Ijack yeaudio, unokumamela iAudiobook
Ixabiso le- € 232 (Ngoku ithengiswa nge- € 202)
Njengoko ndihlala ndisitsho, ndiyathanda ukubona ukupakishwa kuba kubonakala kum isibhengezo senjongo yento esiza kungena kuyo kwaye inyani kukuba iLikbook Mars yiza ilungiselelwe kakuhle. Uyilo oluhle kunye nebhokisi engqongqo. Ndiyayithanda intambo etyheli eyizisayo.
Emfanekisweni ndishiya ikhava esemthethweni ekhusela kakuhle kodwa ijongeka ngathi yeplastiki. Isixhobo kungcono ukusibamba netyala ngaphandle kwaso. Ubuncinci leyo ibiyimvakalelo yam.
Iprojekthi kaGutenberg: iincwadi ze-e kummandla woluntu
Isicwangcisi esidliwayo esidala ngokwenkangeleko. Ngamanye amagama, injengabafundi esibaqhelileyo kodwa bakhulu, bakhulu kakhulu.
Ukubamba ubunzima, indawo ebuthathaka
Inokuba yenye yeendawo ezibuthathaka kwesi sixhobo xa kuthelekiswa nokhuphiswano. Kwaye kubonakala ngathi siyayiqhela into yokuba izikrini ezinkulu ziza nokubamba ngasemva njenge-Oasis okanye nge-bezel yeForma kwaye kukuba xa sele sizamile olo hlobo lwenkxaso kunye nokuphosa. I 7,8 ″ zininzi i-intshi zokubamba xa ufunda nangaphezulu malunga nee-gram ezingama-300 ezinobunzima, ezenza ukuba ungonwabi kwizikhundla ezithile.
Umva wenziwe ngeplastikhi egudileyo kwaye nangona ingatyibiliki, ukubambeka kuyaphoswa endaweni yokhuseleko. Njengoko benditshilo, kubonakala ngathi isiciko sikunika ukhuseleko olongezelelekileyo xa kuziwa ekuchongeni.
I-Likbook ineWIFI, ibluetooth kwaye ifunda amakhadi e-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-64Gb. Kuza nesixhobo esifakelwe ukuhambisa iifayile nge-wifi ukusuka kwi-pc okanye isixhobo esidityaniswe kwinethiwekhi efanayo.
Ukongeza, njengoko sinako ukufaka usetyenziso olufana neGetpocket okanye iAmazon kunye neKobo kwaye siqhagamshelwe kwiiakhawunti zethu, bayenza ukuba ibe sisixhobo esinamandla ngaphandle kwemfuneko yokuba nasiphi na isitolo okanye uluntu, okanye nayiphi na i-ecosystem yentengiso yeencwadi uyixhase.
Ukukhanyisa kunye nebhetri
Ukuhlaziya i-A2 esivumela ukuba siphucule isantya sokulayisha, kufanelekile ngakumbi ekusebenziseni izicelo zomntu wesithathu, ukukhangela i-Intanethi, i-instagram, i-facebook, njl.
Ivumela umahluko wesicatshulwa kunye nemifanekiso, kunqabile ukuba yahlule izinto kwiifayile.
Kuza ngokukhanya ebusuku okujika iscreen seorenji ukuphazamisa ukulala. Iyafana neKobo Comfortlight kodwa ngaphandle kwegama.
Ibhetri ye-3200 mAh iya kusinika uvuyo iiveki ezininzi. Ndivavanye isixhobo kuphela kwimowudi yokufunda kunye nezinye iiapps ze-Android, ukuba simamela umculo okanye ukusebenzisa kakhulu isikrini kunye nesicelo, andazi ukuba siza kuphendula sithini.
I-Android kunye namathuba ayo
Bonke abafundi be-Android endibavavanyileyo ukuza kuthi ga ngoku babengenasiciko. Awungekhe uzonwabele ekuhambeni kancinci, ukuxhoma, njl. Kodwa njengoko sele nditshilo oku akwenzeki nge-Likbook Mars. Iprosesa ephambili ye-Octa iyizisa ebomini kwaye iyenze ibhabhe. Iscreen sokuchukumisa sisebenza ngokugqibeleleyo.
Umfundi onebango kwenye into engaphezulu. Kwaye ukuba siqhele ukubafundela abaxubileyo ekufundeni, uninzi lwabo olunomsebenzi ekwabelwana ngawo kwinethiwekhi yoluntu kunye nesikhangeli sewebhu esingasebenzi kakuhle. Kwaye apha sinendalo iphela ye-Android kunye nokusetyenziswa ngumntu wesithathu entendeni yesandla sethu. Ungafaka izikhangeli ezikhanyayo, abafundi be-pdf, i-getpocket, i-youtube (ewe i-youtube nayo) kunye nezinto ezinomdla kakhulu njenge-ivoox, njl.njl.
Ekupheleni koqwalaselo kwakhona ndishiya igalari kunye neefoto ezinamamenyu ukuze ukwazi ukubona okuncinci okunikezelayo.
Ndamangaliswa kakhulu yi-Likbook Mars kwaye andothuki xa kuthathelwa ingqalelo, njengoko benditshilo ekuqaleni kwimithombo yeendaba ezininzi, njengomnye wabona bafundi babalaseleyo okanye oyena mntu ufundayo ka-2018. isixhobo, kwaye siyenze ibe luncedo kakhulu. Yandisa umxholo we-ebook, uyeke ukuba sisixhobo esikhethekileyo ukuze ukwazi ukwenza enye into.
Kwaye sisixhobo se-Android esinehardware yokutshatisa, iintshukumo zinamanzi kakhulu, isikrini sikumgangatho ophezulu kwaye isikrini sokuchukumisa sikhawuleza. Izinto ezingaphumeleli kwabanye abafunda nge-Android kwaye ezenza ukuba ube namava amabi ekusebenziseni kwayo.
Ndingathanda ukubona esi sixhobo siyilwe kakuhle, njenge-Oasis kunye neKobo Forma.
Ukuba ucinga ngokuthenga iscreen esikhulu sokufunda, ndicinga ukuba kufanelekile ukuba usilinganise njengesiphelo esiphakamileyo.
Ngendlela, ngoku banamaTshayina, amaNgesi, amaFrentshi, amaTaliyane kunye nezinye iilwimi kwaye bayaqinisekisa ukuba iSpanish izakufika kungekudala kwaye njengezinye izinto ezisebenzayo ziya kufakwa kuzo zonke izixhobo njengokusebenza kwesoftware.
I-Android ikuvumela ukuba wenze imimangaliso
Imowudi A2 yokuhlaziya
Ungasebenzisa iiapps zeAmazon kunye neKobo
Sinokumamela umculo kunye neencwadi ezimanyelwayo
Ubungakanani ukuba into oyifunayo kukuhlala uyiphatha
Ulwimi lweSpanish lulindile
Njengesiqhelo, ukuba ufuna ukubuza umbuzo, ungashiya amagqabantshintshi.
Sishiya ezinye iifoto kwigalari ukuba ufuna ukuzibona ngokweenkcukacha.
Igalari yefoto yeLikbook Mars
Inkqubo yokusebenza yegalari yomfanekiso
Ukuze ukwazi ukubona ezinye zeendlela ezinokuthi ziqwalaselwe, nangona ndibeke ezimbalwa kuba phantse yonke into inokuqwalaselwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Zonke iiReaders » isibulali » I-eReaders » Uvavanyo lweBoyue Likbook Mars
Enkosi kakhulu kuhlolo lwakho. Ndinayo ngokubona kwam. Okwangoku ndineKobo Clara HD, Kobo Aura One, Kobo H2O, kunye noPhepha lwePhepha. Ukuba ndithenga omnye umfundi, ongandifuniyo, iya kuba yeyomntu one-Android, ukuze abone into eyahlukileyo. Kodwa umbuzo wam bubunzima, xa kuthelekiswa neKobo Aura One, ngaba uziva unzima? Ngaba ukwazile ukufunda nawuphi na umfundi we-Moonlight Pro epub?
Iyafana kakhulu ngobunzima kwi-Kobo Aura One, indinika imvakalelo yokusinda. Hayi kakhulu, kodwa enye into. Nangona ndingazi ukuba kungenxa yokuba ndiyazi ukuba inobunzima obungama-60 eegramu ngakumbi kwaye konke kuyingqondo.
Ngoyilo ndiyayithanda ngcono i-aura, isikrini kunye nezakhelo zikwinqwelomoya efanayo kwaye kwi-likbook mars isakhelo singaphezulu kwesikrini. Ukubamba ngasemva, njl.
Ewe indawo ye-Android ipholile kakhulu. Ngale nto uphuma kwizinto eziqhelekileyo.
Khange ndizame nawuphi na umfundi we-epub. Ndizamile iPokotho kunye neAdobe
Ukuba ufuna ukuzama into eyahlukileyo, ndicinga ukuba uya kuyithanda kuyo yonke into ekuvumela ukuba ungcolise.
UAitor Gallego sitsho
Molo ulungile, ndinayo le ncwadi ye-Mars ngokubona kwam kunye neKobo Forma kunye neAura One kwaye into endiyifunayo ngaphezulu kwako konke ibomi obuphezulu bebhetri, kuba ndinokuncamathisela iiseshoni ngaphezulu kweeyure ezi-5 ngosuku iveki yonke . Ke umbuzo wam ngulo: kwezi zintathu, yeyiphi enebona bhetri inde? Kuyacaca ukuba incwadana yokubhala ene-3 mAh inebhetri enkulu, kodwa ndicinga ukuba i-Android izakutya kakhulu.
Okokugqibela, ukuba uyamazi umntu otyayo ngaphezu kwee-intshi ezi-7 kunye nebhetri ephezulu kunale ikhankanyiweyo, ndingavuya kakhulu ukuba ungandazisa, kuba andithathi sigqibo kwaye nanini na xa idlula ii-intshi ezisi-7, ibhetri yeyona nto iphambili kum.
Phendula kuAitor Gallego
Ndiyabulela uphononongo, enye ishiywe ifuna ukuyizama, umbuzo ngulo, ingaba lubuthathaka kangakanani iscreen ukuze sikwazi ukubhala izichasiselo?
Mholweni. Ndikhangela umfundi omtsha ukuba athathe umhlala-phantsi lo ndinaye. Ukugxeka okwenzayo kubonakala kuluncedo kakhulu kum, kodwa andikakwazi ukwenza isigqibo sam. Ungandinika isandla?
Okokuqala, ndiyakuthanda ukufunda, kodwa ndiyathanda ukuyenza ngokuzolileyo, ekhaya, okanye kwindawo apho ndingenaziphazamiso zininzi kakhulu; Oko kukuthi, andizukufunda kuloliwe ongaphantsi komhlaba okanye elunxwemeni, ukuze incinci ukuyiphatha andikhathali. Ngaphezu koko, umfundi wam omdala ngu-7 "kwaye ndicinga ukuba u-6" uya kuba mncinci kakhulu kum.
Uninzi lweencwadi zedijithali endinazo zikwifomathi yePDF, kodwa andizukucinga ngokutshintsha ifomathi, ndikhangela i-epub, okanye nantoni na.
Ndicinga ukuba kubalulekile ukuba inesibane sayo kwaye ibhetri ayikunyanzeli ukuba uyihlaziye rhoqo emva kweentsuku ezi-3. Ibhetri yam "yafa" kwaye indinyanzela ukuba ndiyiphinde ndiyenze ngokutsha rhoqo, kwaye inenzondo. Ukuba andikazenzi zitsha iiveki ezi-2, ndiza kuyithatha njengempumelelo.
-Iibhanti, kuba ndiqhele zona, kodwa ayisiyonto ibaluleke ngokwenene.
-Ingxolo. Ayibalulekanga nokuba yeyiphi, kodwa ndingathanda ukwazi ukuba zeziphi ezivumela iaudiyo. Le (iLikebrook Mars) iyayivumela, kodwa ayikho ngeSpanish, umzekelo.
Kwaye ekugqibeleni ndifuna ukuba ibe lutyalomali olulungileyo. Kudala ndijonga kwi-Kindle Oasis, Kobo Aura One kunye neKobo Forma ezinomtsalane, kodwa andiqinisekanga ukuba ukuchitha i-euro ezingama-200-300 kumfundi we-e lolona tyalo-mali lubalaseleyo (ukuba emva kwexesha elifutshane bangaqala ukusilela, umzekelo).
Kubonakala kum kwinqanaba leKobo kunye nohlobo malunga nobuntununtunu
Ukuba sithetha ngeAudio, ii-brand ezaziwayo kunye nescreen esikhulu, ndicinga ukuba i-likbook kuphela.
Nawuphi na umntu ofundayo kufuneka abekhona iminyaka. Ndisebenzisa i-Kindle 4 yam eya kuba neminyaka emi-6 ubudala
Molo Nacho. Enkosi kakhulu ngokuphendula. Ndikubuza umbuzo wokugqibela, ukuba kunokwenzeka. Ndijonge kwi-Kobo Aura H2O Edition 2. Ngaba umahluko wesisombululo uyabonakala ngokwenene? Ukusuka kwi-300ppp ye-Oasis kunye neAura One ukuya kwi-265 yeAura H2O?
Ndikhangela umfundi one-Android, ukongeza kwiincwadi zokufunda, endivumela ukuba ndifunde. Ndijonge ngayo umfundi endivumela ukuba ndifunde kwaye ndikrwele amanqaku. Kuqala ndicinge ngescreen se-10,3, kodwa kuba ndihlala ndiyithatha kwindlela engaphantsi, ndicinga ukuba ngescreen se-7,8 it kunokuba kufanelekile. Emva kokujonga okuninzi, ndicinga ukuba iimars ze-likbook kunye ne-onyx boox nova inokulingana nale nto ndiyifunayo. Ungandicebisa ntoni? Kuzo zombini, ngaba unokukhuphela usetyenziso kwii-docs ukuze ukwazi ukubhala? Andikwazi ukugqiba.
UMnu K sitsho
Uphononongo olukhulu, bendihlala ndisebenzisa i-Kobo, kwaye bendisoloko ndibeka phambili olu phawu kulungelelwaniso lwayo nePocket. Ukukwazi ukugcina amanqaku okanye iindaba kwaye uzithathe naphina ngaphandle kokuziguqula ziye kwi-epub (okanye i-pdf okanye nantoni na) yindawo enomdla kakhulu. Nangona kunjalo, bendihlala ndingenayo "into" kwabafundi, kwaye ezo zixhaphake ngakumbi (iBox, umzekelo), zixabiso. Oku, ngaphandle kokuba kubiza ngandlela ithile, ayidluli (okwangoku) € 250 kwaye ilicwecwe onokufunda nokufunda ngaphandle kokubona emehlweni (ndine-iPad kwaye iyabonisa, andikwazi ukufunda ngaphezulu kwesiqingatha seyure kuba ukubona kuyaphela kwaye intloko yam iyajikeleza)
Molweni nonke. Ndine-Likbook Mars kwaye ndonwabile kakhulu, ndifunda ukuyisebenzisa bhetele, nangona kukho into enye ethi nangona ndiyonwabile, ndingathanda ukwazi ngcono: Isichazi-magama ngeSpanish. Ndinesichazi magama seRAE silayishiwe, ndizilayishe ngokwam, nangona ndingaqinisekanga ukuba njani Ndingathanda ukulayisha iWikipedia, umzekelo, okanye enye i-Encyclopedia, kodwa andizifumani iindlela zokwenza. Enkosi kwaye konke ku. Ndincede Nceda
Namhlanje emva kohlaziyo oluninzi (ndicinga ukuba) ngaba le nto uyifundayo iyakufanelekela? Inyaniso kukuba, ndiyifumene ubungakanani besikrini esifanelekileyo kwiincwadi zobuchwephesha kwaye ndiyathemba ukuba ndiyifundile imanga kodwa ndifumana ixabiso layo liphezulu, umntu angandixelela kulungile okanye ikhona enye indlela ebhetele?
UCristian Carzolio sitsho
Molo, ndiyithengile inemincili kwaye andiziphiki izibonelelo zayo kodwa inengxaki esisiseko ekhokelela ekubeni ndingayicebisi, ukuba uza kufunda elangeni iplastiki esecaleni kwesikrini iqala ukunyibilika. Into efana nale yenzekile kum ne-ereader yaseArgentina kodwa ibitshiphu kakhulu kwaye khange ndibeke gquma kuyo. Le inetyala kwaye kufanele ukuba ibengomnye wabafundi abafunda kakuhle kwihlabathi. Yayivakala ngathi ngumkhonyovu. Ukubulisa. UCristian Carzolio carzolio@fibertel.com.ar
Phendula Cristian Carzolio
Molo Cristian, kwaye sele uyikhankanyile loo nto kwi-brand? Kuba isisixhobo esineziphene. Akubonakali kuyinto eqhelekileyo kum.
I-Likebook Mimas: I-eReader entsha kaBoyue